दाङमा पनि कोरोनाविरुद्धको खोप सुरुः कसैलाई डर, कसैलाई उत्साह – Himalitimes
दाङमा पनि कोरोनाविरुद्धको खोप सुरुः कसैलाई डर, कसैलाई उत्साह
२०७७ माघ १४ १४:५१ मा प्रकाशित
दाङ। कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दाङमा पनि लगाउन सुरु गरिएको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको हो।
राप्ती प्रादेशिकका मेडिकल सुपरीटेण्डेन डा. विनोद सिंह र प्रतिष्ठानमा निर्देशक डा. सागर पन्थीले खोप लगाएर अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए। कोरोना महामारीको समयमा ज्यानलाई जोखिममा राखेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले खोप लगाउन पाउँदा खुशी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत गुरुप्रसाद योगीले खोप लगाउँदा मनमा डर लागिरहेको बताए। पहिलोपटक कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा केही असर हुन्छ कि भन्ने डर लागे पनि कोरोना नियन्त्रणमा मद्दत गर्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, सोही अस्पतालमा कार्यरत सुलभ अधिकारीले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा खुशी लागेको बताए। हरेक औषधिको साइड इफेक्ट हुने भएकाले पनि यस खोपको पनि हुनसक्ने भन्दै खोप लगाइसकेपछि ढुक्क भएर काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘अस्पतालमा काम गर्दा कति बेला संक्रमित भइन्छ, थाहा थिएन’, उनले भने‚ ‘तर, अहिले खोप लगाउँदा अब संक्रमण भए पनि कुनै डर हुँदैन।’
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारी खोप लगाउँदा कुनै पनि असर नगर्ने बताउँछिन्। खोपले सानोतिनो असरबाहेक अन्य कुनै असर नहुने उनको भनाइ छ। उनले खोप दिनका लागि केही मापदण्ड तोकिएको समेत बताइन्।
दाङमा पहिलो चरणमा तीन हजार व्यक्तिका लागि खोप आएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। एकजना व्यक्तिलाई दुईपटक खोप दिइने भएकाले २८ दिनपछि फेरि दोस्रोपटक खोप दिइने कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले बताए। पहिलो दिन प्रत्येक अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी लगायतले खोप दिइने उनको भनाइ छ।
नवदुर्गाको काकाकुल बस्तीमा पुग्यो खानेपानी
रमेश हमालको शब्द/संगीतमा मार्मिक लोकदोहोरी गीत ‘कुन पापीले’ (भिडियो सहित)